Local gold price drops by around K50,000 over the weekend
M1 Group says it has no connection to the military
METRO to cease operation in Myanmar
Price floor for rice proposed at MMK560,000 per 100 tins
Kirin writes off $193 million but not planning to leave Myanmar
Telenor Group sells Telenor Myanmar to M1 Group
Home Business Local Page 57
Govt to provide financial aids to pregnant mothers
Myanmar E-commerce Current Scenario
Yangon to issue QR Pass for Payroll Processing
Grab Launches GrabAds, Myanmar’s First Digital Display Advertising Service in Grab Taxi
Mido’s Ocean Star Tributes Mark Collection’s 75th Anniversary
Swiss watchmaker Mido has launched the Ocean Star Tribute special editions to celebrate the 75th anniversary of the iconic collection, first unveiled in 1944. The Ocean Star collection epitomizes the brand’s watchmaking knowhow asamaker of reliable timepieces with high performance water-resistance system. The two special editions make multiple nods...
Govt to give K40,000 per household in July and August
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The government of Myanmar will provide K40,000 to each of over 5.4 million households with unregular income across the country: K20,000 in late July and the other K20,000 in late August, according to U Zaw Htay, Director-General of the Ministry of State Counsellor Office. When providing financial assistance,...
နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအား လျှောက်ထားစရာမလိုဘဲ အလိုအလျောက်တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများ(မြန်မာနိုင်ငံသားများအပါအဝင်)အား နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ လာရောက်လျှောက်ထားစရာမလိုဘဲ အလိုအလျောက်တိုးမြှင့်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ(၂၁)ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပြည်ဝင်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့် နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရုံး၌ လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့် Covid-19ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို တားဆီးရန်အလို့ငှာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဆိုသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေပြီ နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော မြန်မာနိုင်ငံ ကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မေလ(၅)ရက်မှ ဇူလိုင်(၃၁)အထိ လျှောက်ထား ရန်မလိုဘဲ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အလိုအလျောက်တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပထမအကြိမ်အဖြစ် မတ်လ(၂၆)ရက်မှ ဧပြီ(၃၀)ရက်အထိ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ကောင်စစ်နယ်မြေများဖြစ်သော ချင်းမိုင်ပြည်နယ်၊ လန်ဖွန်းပြည်နယ်၊ လန်ပန်းပြည်နယ်၊ ဥတ္တရာဒစ်ပြည်နယ်၊ ဖရာယ့်ပြည်နယ်၊ နမ်ပြည်နယ်၊ ဖယောင်းပြည်နယ်၊...
Mandalay allows home-used car back on the street; but only four passengers on board
(English Text Below) ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့မှစတင်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သွားလာမည့် အိမ်စီးကားများတွင် ယာဉ်မောင်းအပါအ၀င် လူလေးဦးသာ လိုက်ပါစီးနှင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာ ပြည်သူလူထုထံသို့ ရောဂါမပြန့်ပွားစေရန်နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားရေးတာ၀န်တစ်ရပ်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရှိစေရန်အတွက် ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့် အိမ်စီးကားများသာ သွားလာခွင့်ပြုထားပြီး ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများ၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များ၊ အပန်းဖြေ ခရီးသွားယာဉ်များကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့် မေလ ၁၅ရက်နေ့အထိ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ယာဉ်များ ၀င်ထွက်သွားလာမှုကို ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့အထိ တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း COVID 19 ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မေလ ၁၅ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊...
Corporate Governance Order for Public, Listed Companies in the Works
by Zin Thu Tun The Ministry of Investment and Foreign Economic Relations is working onacorporate governance order for public companies with over 100 shareholders and companies listed on the Yangon Stock Exchange. “This order is intended to support capital market development in the country. We will issue the order...
The local gold price when the market closed on Friday, September 10, was at K1.91 million per tical compared to K1.855 million on September 13 representing aroundaK50,000 drop over the weekends. (tical= 16.3 g) Global gold price is USD $1,789 per ounce on September 13. The local gold price...
Pubrica's companies span all phases of scientific and academic writing, enhancing, and publishing. We provide skilled editing and proofreading services as nicely. Other than penning excellent papers, we also supply free revision services throughout the first two weeks after the supply. Discovering one which phd dissertation writing services evaluations...
MFF Calls for Nearshore Fishing Ban
The government has put in placeaban on offshore fishing during breeding season from June to August to protect egg-bearing fish and fingerlings and preserve fishery resources. The Myanmar Fishery Federation (MFF) recently called foraban on nearshore fishing during the same period. “The ban restricts fishing...
New York Time The It bag may be more like an old hat these days – at least when it comes to fashion’s front row. But exclusivity is not exactly out of style; it’s just no longer symbolized by something you can swing from your arm. In 2020, partying with Prada...
Inside Myanmar’s First Tech Hub
If you believe in investing inavision rather than just in companies, Myanmar’s first tech hub, Phandeeyar, will give you the lowdown on the country’s burgeoning startup market. Nowadays, buyingaSIM card for $1.5 or less has become commonplace, yet it would have been unthinkable in Myanmar just...
Users in3Cities Can Pay Electricity Bills via Mobile Banking...
Central Bank sells USD15 million inaday to bring down...
Jobseekers Find it Difficult to Secure Work through Ministry